Dadku goormay Qarankooda jeclaan karaan? (WQ: Mahad Boss) - SHABAKADDA WARBAAHINTA GEESGUUD | SHABAKADDA WARBAAHINTA GEESGUUD
Dadku goormay Qarankooda jeclaan karaan? (WQ: Mahad Boss)
Dadku goormay Qarankooda jeclaan karaan?
Qaranka jeceylkiisu maaha wax iska yimaada mana aha wax lagu dhasho laakiin waa wax u baahan kasbasho iyo lexejeclo .
Matalan muwaadiniinta hadii loo hagaajiyo arimaha bulshada sida caafimaadka, waxbarashada biyaha iyo wadooyinka isla markaana loo sameeyo shaqo abuur ku salaysan cadaalad iyo sinaan.
Taasi waxay keensanaysaa dal jeceyl iyo wadaniyad
Iyo in uu muwaadinku noqdo qof ah Notionalist oo waliba ilaashada cadawna aanu soo dhexmarin.
Tusaale ahaan Dadka Jasiiŕada reer Cuba waxay col ahaayeen Maraykanka mudo dheer waxay isu jiraan masaado dhan 400km dhinaca bad ah halka Maraykanku Weeraro wadamo Qaarada kale ku yaala oo uu ka dhexsamaysto Jabhado iyo basaasiin.
Hadana waligii umay suurogalin Maraykanka in uu dhexgalo dadka reer Cuba sababtu waxaa weeyaan dadka reer cuba waa dad nationalist ah sababtoo ah waxay ka mid yihiin wadamada muwaadiniintoodu ugu caafimaadka iyo waxbarashada fiican yihiin dunida waana ta wadankooda jeclaysiisay ee loo gelikara waayey sirdoon ahaan iyo jabhado ahaanba loona ridi kari waayey madaxweynahoodii muda dheeraa ee fidal Castro iyo walalkiisa imika xukuma ee Raul castro.
Sidoo kale Boqortooyinka carabtu muwaadininta ku nool wadamadaas waxay hagaajiyaan Nolashooda oo ay ugu horayso caafimaadka, dhaqaalaha iyo wadooyinka inkastoo waxbarashadoodu aanay gaadhsiisnay heerkii loo baahna oo yara siyaasadaysantahay hadana wadamada carabtu shacabkoodu waxay ku noolyihiin nolal saraysa gaar ahaan khaliijka sidaa daraadeed ma qiimayeen cida xukumaysa balse waxay qiimeeyaan noloshoda.
Halka wadama galbeedkuna ay aad u qiimeeyaan muwaadiniintooda marka laga eego dhinackasta haday noqoto waxbarasho, caafimaad,Adeega laydhka iyo biyaha wadooyinka iyo shaqosiinta iyo kuwa aan shaqayn oo la siiyo waxaa loo yaqaan welfare-ka.
Xaga amniga waxaad marar badan maqlaysaa wadankaas oo muwaadiniintiisa ugu digay in aaanay tegin meel heblaayo sababo amni waana qiimayn la siinaayo dhiiga iyo sharafta muwaadiniinta.
Isma barbardhigi karno wadamadaas laakiin waxaan kaga dayankarnaa dal jecaylka dadwaygaas iyo bixinta adeegyada dadweynaha oo keensanaya wadaniyad aynu rabno iyo in ay dadku jeclaadaan wadankooda kana baxaan qabyaalada sad bursiga iyo is milicsiga.
Hasamaato oo hala helo.